India: fahafatesana fiteny efa nisy nialoha ny tantara voasoratra · Global Voices teny Malagasy
India: fahafatesana fiteny efa nisy nialoha ny tantara voasoratra
Voadika ny 10 Febroary 2010 9:06 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Português, Italiano, Français, Español, македонски, বাংলা, polski, 简体中文, 繁體中文, Ελληνικά, English
Nodimandry tao amin'ny nosy Andaman (anisan'i India) ny mpiteny Bo fahagola farany, Boa Senior, tamin'ity volana febroary 2010 ity. Manamarina miharihary ny tatitra nataon'ny UNESCO tamin'ny herintaona indrindra izany, izay nampitandrina fa fiteny 2500 no ahiana hanjavona.
Lahatsary: Boa Senior mihira amin'ny fiteniny Bo, hita tao amin'ny Survival International
Ao amin'ny bolongany True to Words (Marina amin'ny voambolana) miompana amin'ny “fanavatsavana ny fiteny sy ny soratra,” no itateran'i Sara Duane izay mipetraka any Minnesota ny vaovao sy ny doka nilazany fa fiteny efa maty vitsivitsy no velona indray teo ho eo:
Tamin'ny taona 1992 no naminanian'ny manampahaizana Amerikana malaza iray fa mialoha ny taona 2100, dia hitsahatra tsy hisy intsony ny 90% n'ny fiteny manerantany. Maty ny iray amin'izany fiteny izany tamin'ny volana lasa teo rehefa nodimandry i Boa Sr. izay 85 taona. Izy no mpiteny farany indrindra ny teny Bo, izay iray amin'ny fiteny ela niainana indrindra teto ambonin'ny tany raha naharitra 70 000 taona.
Mety ho voasintona avy any an-tevana, eny mety ho avy amin'ny fahafatesana mihitsy aza ny fiteny, raha matanjaka ny fikirizana ary ny tena zava-dehibe, dia raha mba voarakitra an-tsoratra ny ankamaroany. Fiteny maty ny teny hebreo tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-19. Nisy amin'ny maha-teny voasoratra ho an'ny manampahaizana izy tamin'izany fotoana izany, fa tsy nisy fomba nahalalana hoe ahoana no hanononana ny voambolana. Fikirizana sy finiavana avy amin'ny Jiosy Isiraeliana no nampiverina azy ho fiteny fampiasa andavanandro. Nisy ihany koa ny nifohazan'ny fiteny “Gallois” any Angletera sy ny fiteny Maori any Nouvelle Zellande.
Transubstantiation, izay manonona ny tenany ho miezaka ny “hampisy dikany ny lova avy amin'ny tilikambon'i Babel,” no nanolo-kevitra hanangona ny fiteny andalam-pahafatesana:
Raha mba manana fahafahana hitahiry ny teny velona isika dia andao hotehirizintsika amin'ny fomba rehetra izany. Na izany aza indraindray dia tsy azo tanterahina izany fa angamba ny adidintsika amin'ny maha-mpandalina fiteny antsika dia ny hanadihady, hitantara ary ny hanangom-baovao; handrakitra ireo fiteny an-dalam-pahafatesana mba hahafahana mampiasa azy rehefa misy ny fikarohana momba azy hahalalàna bebe kokoa ny zavamisy iainan'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny.
Ny nosy Andaman avy eto an-habakabaka avy amin'i Venkatesh K ao amin'ny Flickr
Madhu Baganiar, izay ao anatin'ny fokonolona indizeny Oraon (Kurukh) raha milaza ny faharesen'ny Bo niara-maty tamin'i Boa senior:
Samy manana ny tantarany (ankapobe), kolontsainy sy ny azony tantarainy manokana ny fiteny tsirairay avy. Raha maty ny fiteny iray dia maty miaraka aminy ihany koa ny tranoben'ny fahalalàna nentiny. Ankehitriny, maty ny fitenim-poko “Bo”. Rahampitso dia ho maro ihany koa ny fitenim-poko hifampitarika ho faty. Anjatony ny antony mahatonga ny fahafatesana fitenim-poko velona…
Misaona noho ny fanjavonan'ny fiteny Bo ny mpamaham-bolongana mipetraka any Ireland The Poor Mouth ary niteny hoe:
Misy ny fiteny tonga ary misy ny fiteny lasa – mbola mahita ny dia navelan'ny fiteny very any amin'ireo nosy britanika (Yola, Norn, Cumbric sns) isika – saingy tsy azo sakanana aho hahatsapa fa raha maty ireny dia misy zava-dehibe niraraka avy amin'ny lasopy lehibe mandrafitra ny maha-olona amin'ny ankapobeny. Mampihen-danja antsika rehetra ny fahalasanan'i Boa.
Indonezia 5 andro izay